ဗန်နီဇွဲလားနိုင်ငံ ရေနံချက်စက်ရုံ ပေါက်ကွဲမှု ၂၆ ဦးသေဆုံး
ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံက အကြီးဆုံး ရေနံချက်စက်ရုံမှာ အကြီး အကျယ် ပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ပွားပြီး လူ ၂၆ ဦးမက သေဆုံးသွား ပါတယ်။
Posted by ရွှေနိုင်ငံ at 23:29 No comments:
လျှပ်စစ် ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်မှု တိုးတက် လာရေးအတွက် ပြည်တွင်း ပြည်ပ လုပ်ငန်းရှင် များအား ဖိတ်ခေါ်
အမှတ်(၁) လျှပ်စစ် စွမ်းအား ဝန်ကြီးဌာန ရေအား လျှပ်စစ် စီမံရေး ဦးစီး ဌာနနှင့် မြန်မာ တိုင်းရင်း သား ကုမ္ပဏီ တစ်ခုဖြစ်သော Virtue Land Co.,Ltd. တို့အကြား ရန်ကုန် ကျောက်မီးသွေးသုံး ဓာတ် အားပေး စက်ရုံ စီမံကိန်း အား B.O. T စနစ်ဖြင့်အကောင်အထည်ေ ဖာ် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အတွက် နားလည်မှု စာချွန်လွှာ (Memorandum of Understanding)လက်မှတ် ရေးထိုးပွဲ အခမ်းအနား ကို သြဂုတ် ၂၄ ရက် ညနေပိုင်းက နေပြည်တော် ဟိုတယ်ဇုန် ရှိ မြတ်တော်ဝင် ဟိုတယ်၌ ကျင်းပသည်။
Posted by ရွှေနိုင်ငံ at 23:27 No comments:
ဆေးဝန်ထမ်း၏အသက်ကို ကယ်တင်ရန် မိုင် ၂၀၀၀ ခရီးကို ဗြိတိန်စစ်သင်္ဘော ခုတ်မောင်း
ဗြိတိသျှ တော်ဝင်ရေတပ်မှ စစ်သင်္ဘော တစ်စင်းသည် ဝေးလံသီခေါင်လှသည့် ကျွန်းလေးတစ်ခုပေါ်မှ အရေးပေါ် အကူအညီ တောင်းခံမှုကြောင့် မိုင်(၂၀၀၀) ခရီးကို အလျင်စလို ခုတ်မောင်းခဲ့ရကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာအစိုးရဘက်မှ တတိယအကြိမ်မြောက် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးဆွေးနွေးပွဲရက် ရွှေ့ဆိုင်းခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကေအင်န်ယူ
ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးက သဘောထားကြေညာချက်ကို သြဂုတ်လ ၂၅ ရက် နေ့စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
မြို့သစ်ကြီးကျေးရွာတွင် ရွာသားတစ်ဦး KIA တပ်ဖွဲ့ဝင်များ ထောင်ထားသော မိုင်းနင်းမိ
ကချင်ပြည်နယ်၊ မိုးကောင်းမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ မြို့သစ်ကြီးကျေး ရွာနေ ရွာသားတစ်ဦး KIA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ ထောင်ထားတဲ့ မိုင်းအား နင်းမိ၍ ပေါက်ကွဲခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါတယ်။
ကေအိုင်အေတပ်ဖွဲ့များ တနိုင်းမြို့ပေါ်တွင် အရပ်သားယောင်ဆောင်၍ သွားလာလှုပ်ရှားနေ
ကချင်ပြည်နယ်၊ တနိုင်းမြို့ပေါ်နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်နေရာတွေ မှာ ကေအိုင်အေတပ်မဟာ (၂) မှ အဖွဲ့ ၀င်များ အရပ်ဝတ်များ ၀တ်ဆင်ကာ လှုပ်ရှားသွားလာလျှက်ရှိတယ်လို့ သတင်းရရှိပါတယ်။
ထိုင်းရောက် ရွှေပြောင်း မြန်မာ အလုပ်သမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း
မြန်မာနိုင်ငံမှ ဈေးအသက်သာဆုံးသော ပြည်ပထွက်ခွာမှု. (တရား မ၀င်) များတွင် မြန်မာနိုင်ငံသား အများ ဆုံး ၀င်ရောက် လုပ်ကိုင် လျှက် ရှိသော နိုင်ငံမှာ ထိုင်းနိုင်ငံပင်ဖြစ်သည်။
Posted by ရွှေနိုင်ငံ at 18:08 No comments:
ဒုတိယ သမ္မတ ဒေါက်တာ စိုင်းမောက်ခမ်း Johns Hopkins University မှ ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့အား လက်ခံ တွေ့ဆုံ
ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာ နိုင်ငံတော် ဒုတိယ သမ္မတ ဒေါက်တာ စိုင်းမောက်ခမ်း သည်Johns Hopkins University မှ Prof. Dr. Karl Jackson ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့အား ယနေ့ မွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင် နေပြည်တော် ရှိ နိုင်ငံတော် သမ္မတ အိမ်တော် သံတမန်ဆောင် ဧည့်ခန်းမ၌ လက်ခံ တွေ့ဆုံသည်။
Posted by ရွှေနိုင်ငံ at 18:07 No comments:
အခုအနုပညာ လှုပ်ရှားမှုတွေမှာ လွတ်လပ်ခွင့်တွေ ရလာပြီဆိုတော့ စုန်းကားတွေ သရဲကားတွေ ရိုက်ကြတယ်။ ပရိသတ်တွေက မြန်မာ သရုပ်ဆောင်တွေ လုပ်တာကို မကြည့်ခဲ့ရဘူး။
အကောင်းဆုံး စက်ဘီးစီးသမား တားမြစ်ဆေးကြောင့် ချန်ပီယံဆု ရုပ်သိမ်းခံရ
ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာ ရက်ရှည် မိုင်ပေါင်းများစွာ စက်ဘီးစီး ပြိုင်ရတဲ့ Tour de France ပြိုင်ပွဲမှာ (၇) ကြိမ်အနိုင်ရ ထားတဲ့ အမေရိကန် စက်ဘီးသမား Lance Armstrong ကို အမေရိကန် တားမြစ်ဆေးဝါး သုံးစွဲမှု တိုက်ဖျက်ရေးဌာန USADA က အနိုင်ရသူ စာရင်းကနေ ပယ်ဖျက်ခဲ့သလို စက်ဘီးစီးပြိုင်ပွဲတွေ ကနေလည်း ရာသက်ပန် ထုတ်ပယ် လိုက်ပါတယ်။
ဆီးရီးယား အစိုးရ ဓာတု လက်နက် သုံးပါက စစ်ရေးဖြင့် တိုက်ခိုက်မည် ဟု အိုဘားမား သတိပေး
(၁၄)ကြိမ်မြောက် တရုတ်-ကိုရီးယားဂီတပွဲတော် ကျင်းပ
(၁၄) ကြိမ်မြောက် တရုတ်- ကိုရီးယား ဂီတပွဲတော်ကို သြဂုတ် ၂၅ ရက်က Yeosu Expo Dig- ital Gallery ၌ ကျင်းပခဲ့ ကြောင်း သိရသည်။
ထိုင်းကျောင်းအချို့ မြန်မာစာ သင်နေပြီ
ထိုင်းနိုင်ငံ တောင်ပိုင်း ဖူးခတ်ကျွန်း အပန်းဖြေစခန်းရှိ ကျောင်း တစ်ကျောင်းတွင် အထက်တန်း ကျောင်း သားများ အတွက် မြန်မာ စာလေ့လာနိုင်ရန် သင်တန်းဖွင့် ထားသည်ဟု Bangkok Post သတင်းစာတွင် ဖော်ပြပါရှိသည်။
ကိုယ်ပျောက် အသံတိတ် UNHCR ရုံး စစ်တွေတွင် ဖွင့်လှစ်လှုပ်ရှားနေ
စစ်တွေမြို့ပေါ်ရှိ UNHCR ရုံးကို လမ်းမတော်တောင်ရပ်ကွက်ရှိ ယခင်နေရာတွင် ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ထားပြီး ၄င်း၏ ဘာသာဘာဝ လုပ်မြဲလုပ်ဆဲလုပ်ငန်းများကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေကြောင်း သိရ သည်။
ရွှေည၀ါဆရာတော် တရားပွဲ အောင်မြင် စည်ကား
မြန်မာပြည်က အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကို ဓမ္မခရီးစဉ်အဖြစ် ကြွရောက်လာတဲ့ ရွှေည၀ါဆရတော် ဦးပညာသီဟရဲ့ အမေရိကန်ပြည်အရှေ့ခြမ်း ပထမဦးဆုံး တရားပွဲအဖြစ် နယူးယောက်ပြည်နယ်၊ ဘတ်ဖဲလိုးမြို့မှာ ယမန်နေ့က ကျင်းပဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဦးခင်ညွန့် ကာလရှည် ပဉ္ဖင်း ထပ်ဝ တ်ပြီးတော ထွက်မည်
ယခင်စစ်အစိုးရလက်ထက် စစ်ထောက်လှမ်းရေးအကြီးအကဲဖြစ်သူ ဦးခင်ညွန့်သည် မကြာမီလပိုင်းအတွင်း ကာလရှည် ပဉ္ဖင်းခံရဟန်းဝတ်ရန် အစီအစဉ်ရှိကြောင်း ၎င်း၏ မိသားစုအသိုင်းအဝိုင်းနှင့် နီးစပ်သူတစ်ဦးက ဆိုသည်။
ကချင်နှင့် ရခိုင် ကလေးငယ်များအတွက် ပညာရေး ရန်ပုံငွေ ဈေးရောင်းပွဲတော် ကျင်းပ
ကချင်ပြည်နယ်နှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ ကလေးငယ်များအတွက် ပညာရေးရန်ပုံငွေ ဈေးရောင်းပွဲတော်တခုကို ရန်ကုန်မြို့ ပြည်လမ်းမ ရှိ တော်ဝင်စင်တာတွင် ယနေ့ သြဂတ်စ်လ ၂၅ရက်နေ့တွင် ကျင်းပ ခဲ့သည်။
အင်ဒိုနီးရှား ကြက်ခြေနီ အကူအညီပေးရေး အဖွဲ့တဖွဲ့ မြန်မာသို့ စေလွှတ်
အင်ဒိုနီးရှား ကြက်ခြေနီ (Red Cross) အဖွဲ့မှ အကူအညီ ပေးရေး အဖွဲ့တဖွဲ့သည် မြန်မာနိုင်ငံ အနောက်ဘက်ဒေသ ရခိုင်ပြည်နယ်၏ ပဋိပက္ခအတွင်း ဒုက္ခရောက်နေကြသူများအား ကယ်ဆယ်ရေး ပစ္စည်းများ ပေးအပ်ရန် ယနေ့သြဂတ်(စ်)လ ၂၅ရက်နေ့က ထွက်ခွာ သွားပြီ ဖြစ်ကြောင်း The Jakartaglobe သတင်းတွင် ရေးသားသည်။
"လ" ပေါ် ပထမဆုံး ခြေချခဲ့သူ Neil Armstrong ကွယ်လွန်
လပေါ်မှာ ပထမဆုံး လမ်းလျှောက်နိုင်ခဲ့တဲ့ အမေရိကန် အာကာသ သူရဲကောင်း Neil Armstrong ဟာ အိုဟိုင်းအိုး ပြည်နယ်က သူ့ရဲ့အိမ်မှာ ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါပြီ။
ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံက အကြီးဆုံး ရေနံချက်စက်ရုံမှာ အကြီး အကျယ် ပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ပွားပြီး လူ ၂၆ ဦးမက သေဆုံးသွား ပါတယ်။ နိုင်ငံ အနောက်မြောက်ပိုင်းမှာ စနေနေ့ က ပေါက် ကွဲမှု ဟာ ယိုစိမ့်မှုတခု ဖြစ်ရာ ကနေ ပေါက်ကွဲစေနိုင်တဲ့ ဓါတ်ငွေ့တွေ အများကြီး ထွက်လာလို့ ဖြစ်တယ်လို့ စွမ်းအင် ၀န်ကြီး Rafael Ramirez က ပြောပါတယ်။
Samsung က Apple ကို ဒေါ်လာသန်း ၁ ထောင်ကျော် လျော်ရမည်
အမေရိကန် နည်းပညာကုမ္ပဏီ Apple ရဲ့ ပြိုင်ဘက် တောင်ကိုရီးယားက Samsung Electronic ကုမ္ပဏီဟာ လက်ကိုင် မိုလ်ဘိုင်း ဖုန်းတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ မူပိုင်ခွင့်တော်တော်များများကို ချိုးဖောက်တယ်လို့ ဆိုပြီး Apple ကုမ္ပဏီ ကို နစ်နာကြေး အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်းပေါင်း ၁ ထောင်ကျော် ပေးရမယ်လို့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ကယ်လီဖိုးနီးယား ပြည်နယ် ဂျူရီအဖွဲ့က ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။
ဗန်နီဇွဲလားနိုင်ငံ ရေနံချက်စက်ရုံ ပေါက်ကွဲမှု ၂၆ ဦ...
လျှပ်စစ် ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်မှု တိုးတက် လာရေးအတွက် ပြည...
မြန်မာအစိုးရဘက်မှ တတိယအကြိမ်မြောက် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေ...
မြို့သစ်ကြီးကျေးရွာတွင် ရွာသားတစ်ဦး KIA တပ်ဖွဲ့ဝင...
ကေအိုင်အေတပ်ဖွဲ့များ တနိုင်းမြို့ပေါ်တွင် အရပ်သားယေ...
ထိုင်းရောက် ရွှေပြောင်း မြန်မာ အလုပ်သမားများ အကြောင...
ဒုတိယ သမ္မတ ဒေါက်တာ စိုင်းမောက်ခမ်း Johns Hopkins U...
ရုပ်ရှင်လောကမှာ လွတ်လပ်ခွင့်တွေ ရလာတဲ့အတွက် ဝမ်းသာ...
အကောင်းဆုံး စက်ဘီးစီးသမား တားမြစ်ဆေးကြောင့် ချန်ပီ...
ဆီးရီးယား အစိုးရ ဓာတု လက်နက် သုံးပါက စစ်ရေးဖြင့် တ...
ကိုယ်ပျောက် အသံတိတ် UNHCR ရုံး စစ်တွေတွင် ဖွင့်လှစ...
"လ" ပေါ် ပထမဆုံး ခြေချခဲ့သူ Neil Armstrong ကွယ်လွန်...
Samsung က Apple ကို ဒေါ်လာသန်း ၁ ထောင်ကျော် လျော်ရမ...